Bannaanbax looga soo horjeedo caydii Nabi Muxamed NNKH oo ka dhacay Buuhoodle. – Radio Daljir
Bannaanbax looga soo horjeedo caydii Nabi Muxamed NNKH oo ka dhacay Buuhoodle.
Seteembar 18, 2012 5:11 b 0
Buuhoodle, Sept, 18 – Bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo caydii dhawaan ay faafiyeen qaar-ka mid warbaahinta Maraykanka ayaa maalintii shalay ahayd waxaa uu ka dhacay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.
Boqolaal dadwayne oo caraysan, wajiyadoodana laga dheehan-jaro dareen murugaysan ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee Buuhoodle, kuwaasoo ku hadaaqayay kalmado isugu jira Af-carbeed iyo Af-Soomaali ay ku maagayaan ciddii faafisay cayda Nabi Muxamed NNKH.
Waa bannaanbixii ugu horeeyay ee ka dhaca magaalada Buuhoodle, marka loo eego magaalooyinka kale ee Puntland.
Duqa degmada Garowe C/asiis Nuur Cilmi (Koor) oo maantay ka waramay waxyaabihii kasoo baxay kalfadhigii u soo xirmaray golaha deegaanka degmada Garowe.